ကျွန်တော် မကောင်းဘူး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကျွန်တော် မကောင်းဘူး…
Posted by johnnydeer on Feb 17, 2013 in Short Story | 17 comments
ဒီလောင်းကစားကို ငါတသက်လုံးလုပ်ခဲ့တာပါ ကွ…ဘယ်တော့မှ မကြီးပွားခဲ့ဘူး…မင်း ရှေ့ဆက်ပြီး ဒါကို မစွန့်ပဲ ပေကပ်ပြီးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် မင်းတနေ့ ခွေးဖြစ်မယ်…..
ယောက်ကျားက ဒီလောင်းကစားကို နေ့ကော..ညကော အိမ်ပြန်မလာစတမ်း လုပ်နေလို့ ဘယ်နားမှာ သေနေပြီလဲ…အဖမ်းခံနေရပြီလားဆိုပြီး တသက်လုံး မျှော်ခဲ့ရတယ်…စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်…သူ့ကိုတော့မနိုင်လို့ထားလိုက်တော့…ငါ့သားတွေအလှည့်ကျရင် လုံးဝမလုပ်စေရဘူး…ငါနိုင်အောင် ဆုံးမမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ နင်တို့က နင့်အဖေထက်တောင် အပုံကြီး ပိုဆိုးနေပါလား…ငါ နင်တို့ကို ဘာဆိုဘာမှကို မပြောချင်တော့ဘူး….
ငါလဲ လောင်းကစားလုပ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် မင့်ဟာကြီးက လွန်လွန်းတယ်…နိုင်ရင်တော်တော့လေ…မင်းက နိုင်ချင်တာ မဟုတ်တော့ဘူး…လောင်းကစားလုပ်ရတာကို ပျော်နေတာ…
အရက်သမားကို ချစ်ရတာကမှ သူ့လစ်မစ်နဲ့ သူရှိသေးတယ်…တစ်လုံးသောက်ရင် မူးတဲ့သူက တစ်လုံးပဲဖိုးပဲကုန်တယ်…လောင်းကစားသမားကို ချစ်ရတာ များ စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာ…ဘာလစ်မစ်မှမရှိဘူး….
အကိုသာ လောင်းကစားမလုပ်ပါနဲ့…ရှိတာအကုန်ရောင်းပြီး အကြွေးတွေ အကုန်ဆပ်ပြီး စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်လှပါပြီ…
မင်းက တစ်သိန်းရှိရင် တစ်သိန်းလုံး လောင်းပစ်လိုက်တယ်…နှစ်သိန်းဖြစ်လာတယ်…အကုန်လုံး ထပ်လောင်းတယ်…လေးသိန်းဖြစ်လာတယ်…အကုန်လုံး ထပ်လောင်းတယ်…မင်း တချိန်မဟုတ် တချိန် သေချာပေါက်ရှုံးမှာပဲ…ဘယ်သူမှ အမြဲ နိုင်မနေဘူး…
လောင်းကစားလုပ်ရင် မွဲမှာပဲ…ဘယ်သူကဖြင့် လောင်းကစားလုပ်လို့ မွဲသွားပြီ…တိုက်တွေ…ကားတွေ…အိမ်တွေ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး…ဒီလို အားလုံးက ပြောကြတယ်….ဒီမွဲသွား…ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ငွေတွေ ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ…အငွေ့ပျံသွားတာတော့ မဟုတ်ဘူး…တနေရာရာမှာ သေချာပေါက်စုပုံနေမယ့် ဆုံချက်တစ်ခု ရှိကို ရှိရမယ်…ဒီဆုံချက်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ရှာမယ်…ဒါ ကျွန်တော့် ရည်မှန်းချက်…
ကျွန်တော် သူများတွေနဲ့ တွေ့ရင်ဒီစကားကို အမြဲ ပြောတတ်တယ်… အရက်မသောက်ဖူး…ကွမ်းမစားဖူး…ဆေးလိပ်မသောက်ဖူး…မိန်းမမလိုက်စားဖူးလို့…ဗြုန်းကနဲ ကြားတဲ့သူကတော့ ဒီလူ ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့မလားလို့ ထင်ချင်ထင်ကြလိမ့်မယ်…တကယ်ဟုတ်ပါတယ်…အဲ့ဒါတွေ ကျွန်တော် ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တစ်ခုကို ချန်ပြောခဲ့ပါတယ်…အကျင့်ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုပေါ့….အဲ့ဒါကတော့….
ဒီလောင်းကစားဆိုတာကြီးဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲ…သွေးထဲ…အရိုးထဲ…နောက်ဆုံး ရိုးတွင်းချဉ်ဆီထိတောင် ထိုးဖောက်ပြီးအမြစ်တွယ်နေပြီထင်ပါတယ်…လူမှန်းသိတတ်စ အချိန်ထဲက ရတဲ့မုန့်ဖိုးလေးကို ဘုရားပွဲဈေးသွားပြီး ဖန်ပေသီးလေးတွေကို သံချောင်းလေးတွေကြားထဲ ပစ်ချရတဲ့ ကစားနည်းတို့…ဒလက်ကြီးလည်ပြီး နောက်ဆုံးရပ်သွားတဲ့ ကစားနည်းတို့…မြားပေါက်တဲ့ ကစားနည်းတို့ သွားဆော့နေရရင် စိတ်ထဲ တအားပျော်နေတတ်တယ်….အဲ့ဒီနောက် စကားပြောရင်တောင် ဘာကြေးလောင်းမလဲ ဆိုတဲ့ စကားကို အကျင့်တခုလို ခဏခဏ ရွတ်နေတတ်တယ်…ဒီလိုနဲ့ လူပျိုပေါက် ဘ၀ရောက်လာရော…ဖဲတော့မရိုက်တတ်သေးဘူး…ဒါပေမယ့် ဖဲဝိုင်းတွေတွေ့ရင် ဘေးကနေ မပျင်းမရိ ထိုင်ကြည့်တတ်လာတယ်…
ဒိုးဆက် ဆက်ရင်လဲ လောင်းကြေးလေးနဲ့…လက်တောက်ခုံ တောက်ရင်လဲ…လောင်းကြေးလေးနဲ့..နောက်ဆုံးဘော့လုံးချိန်းကိုင်ရင်တောင် လောင်းကြေးလေးနဲ့မှ ဖြစ်လာတယ်…ဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်းတွေအောင် တက္ကသိုလ်တက်တော့လဲ တခန်းထဲ ကျတဲ့ အခန်းဖော်က လောင်းကစားသမား….သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရိုက်လိုက်ကြတဲ့ ဖဲ…အိမ်ကပို့တဲ့ ပိုက်ဆံ…အကုန်ဖဲရိုက်ပစ်တယ်…၀တ်စရာမရှိ…စားစရာမရှိ…တခါက ခုနှစ်ရက်ဆက်တိုက် ညလုံးပေါက် ရိုက်လိုက်ကြတာ…ကွေးထိုင်ထားတဲ့ ခြေထောက်တွေတောင်သူငယ်ချင်း အကူအညီနဲ့ မနည်းပြန်ဆန့်ယူရတယ်…အဲဒီလောက်အထိ…
အဲ့ဒီနောက် ကျောင်းတွေ ပိတ်သွားတယ်…ကားသမားဖြစ်သွားတယ်…ကားမထွက်ရတဲ့အချိန်ကားသမားသုံးလေးယောက်စုမိရင် ပိုက်ဆံလေးတွေမှောက် နောက်ဆုံးနံပတ်လေးတွေကို ကိုးမီး..ဘူကြီး ရိုက်…အစုံပါပဲ…အဲ့ဒီနောက် ပိတ်ထားတဲ့ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ ကျောင်းပြန်တက်…ဒီတခေါက်ကျတော့ အဆောင်တွေ မပေးတော့ တမြို့ထဲနေသူငယ်ချင်း ငါးယောက် တိုက်ခန်းလေး ဌားနေကြတယ်…ဒီလောင်းကစားကို တက်ညီလက်ညီစိတ်တူ ကိုယ်တူ ချကြပြန်ရော…ဖဲ…အံစာတုံး…ရွှေဘော့လုံး…ဂျင်…ဘာတစ်ခုမှ အလွတ်မပေးခဲ့ဘူး…လူနဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကပ်တယ်ဆိုတာလဲ ဘယ်တော့မှကို မရှိခဲ့ဘူး…အပေါင်ဆိုင်ဆိုတာ ရောက်လိုက်တာမှ ခဏခဏ…ထမင်းဆိုတာ နှစ်နပ် ၀ယ်မစားနိုင်လို့ နေ့လည်စာနဲ့ ညစာ ကြားချပြီး နေ့လည် နှစ်နာရီခွဲ သုံးနာရီလောက် အ၀စားဆိုင် အပြည့် သွပ်ခဲ့ရတာတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်….ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတော့ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ…ဂျင်ဝိုင်းအကြီးကြီးတွေသွားပြီး ပိုက်ဆံလေး ၅၀၀တန်လေးကို ကြိုးထိုးလိုက်…ဗြောင်ရံထိုးလိုက်…ဟိုခေါက် ဒီခေါက် ရံကြိုးထိုးလိုက် …ရံအောထိုးလိုက်နဲ့ တအုပ်စုလုံး လုပ်ချင်တာလုပ် နေချင်သလို နေခဲ့ကြတယ်…ဟန်းချိန်းအတုတ်ကြီး ပတ်ထားပြီး ဂျင်လှည့်နေတဲ့ ဂျင်ဒိုင်ကြီးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ကူးခဲ့တာ ရည်မှန်းခဲ့တာက ငါ အသက်လေးဆယ်မတိုင်ခင်မှာ ဒီလို ဒိုင်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး…ကောင်းလိုက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်…
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းတွေပြီးသွားပါတယ်…မနက်မိုးလင်းထဲကနေ ညမိုးချုပ် နောက်တနေ့ကူးတဲ့အချိန်ထိ ဒီသံသရာကြောထဲမှာပဲ မျောနေခဲ့တယ်…တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လက်ကြီးလာတယ်…လက်ထဲရှိတဲ့ ငွေရဲ့ အဆ နှစ်ဆယ်လောက်ကို ဒီလောင်းကစားလုပ်တယ်…ရှုံးတယ်…တင်တယ်…အကြွေးတွေ…လူကသာ ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတာ…အကြွေးစုစုပေါင်းက သိန်းရာပေါင်းမြောက်များစွာ တင်ခဲ့တယ်…ကိုယ့်နောက်က လူတွေက ကိုယ့်ကို အများကြီးဖြတ်ကျော်သွားခဲ့ကြတယ်…စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ…စိတ်နှလုံးပူပန်တာတွေ…အလိုမကျတာတွေ…ဘယ်လောက်တောင်နှိပ်စက်လိုက်သလဲ…ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှလဲ အဆင်မပြေတော့ဘူး…ယူနိုး…ချီးနိုးနဲ့ အထင်သေးတာတွေလဲ ခံခဲ့ရတယ်…စိတ်ဓာတ်တွေ ဘယ်လောက်တောင်ကျလိုက်သလဲ…ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်တောင်သေမိတော့မလား ဆိုတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါပဲ…အဲ့ဒီတော့မှ ကိုယ်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက် ကိုယ်ချင်းစာပေးမိတော့တယ်…သူတို့ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ဓာတ်ကျသွားကြပါလ်ိမ့်ဆိုပြီး….နောင်တဆိုတာလဲ ရလိုက်တာ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ..ဒီလောင်းကစားကို .ဖြတ်လိုက်တာလဲ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ…ပြီးတော့လဲစိတ်မခိုင်ပဲ ပြန်လုပ်ဖြစ်တာလဲအကြိမ်ကြိမ်အခါခါ…တမှေးမှ မအိပ်ရပဲ မိုးစင်စင်လင်းသွားတဲ့ ရက်တွေလဲ ရီတောင်မရီနိုင်ခဲ့ဘူး…
နောက်ဆုံး ကောက်ချက်ချလိုက်တော့ ကိုယ့်မှာ ဘာအကျိုးရှိလဲ…စီးပွားရေး…အိမ်ထောင်ရေး…လူမှုရေး…ကျန်းမာရေး…ပညာရေး အကုန်ချွတ်ချုံကျသွားတယ်…ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ အကျင့်…၀ါသနာဆိုးဟာ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ဆီမှာ အကြွေးတွေနဲ့…စိတ်ထဲမှာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့…စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ နောင်တတွေနဲ့ ဒါတွေပဲ ကျန်နေခဲ့တာပါပဲ….ဘာမှ ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ ကိုယ့်ဝါသနာကို သတ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တော့ တော်တော် ကြိုးစားရဦးမယ်ထင်တယ်…..ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…အားလုံးလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ၀ါသနာ…အကျင့်ဆိုးကို ကျော်လွှားအနိုင်ယူနိုင်သော သူများဖြစ်ကြပါစေ…အမှန်တော့ ဒီလောင်းကစားဆိုတာကြီးဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကောင်းကျိုးမပေးပါဘူး…ဒါပေမယ့် ၀ါသနာကို မစွန့်နိုင်သေးဖူးဆိုရင်တော့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ…တကယ်လို့များ ဒါကို မစွန့်နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရှိတဲ့ ငွေရဲ့ ဆယ်ပုံ့ပုံ တစ်ပုံလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်…စိတ်နှလုံး ပူပန်စရာမရှိတဲ့ ငွေ amount လောက်ပဲ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ အပျော်လောက်ပဲလုပ်ကြပါလို့…
(ကျွန်တော် စာရေးရင် သူများမကောင်း ကိုယ်ကောင်းကြောင်း ကိုယ်ရည်သွေး စာတွေ ရေးတတ်တာ ၀န်ခံပါတယ်…ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ကျွန်တော့် မကောင်းတဲ့ အကျင့်အကြောင်း ရေးထားတာပါ…သင်ခန်းစာ ယူချင်သူတွေအတွက်လဲ ယူနိုင်အောင်လို့ပါ)
ဖြတ်တဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုခုတော့ ရှိမှာပါ ကြိုးစားကြည့်ပါဦး
လောင်းကစားကတော့ မလုပ်ရင် အကောင်းဆုံး လုပ်ရင်တောင် အကန့်အသတ် နဲ့ ဆို တော်သေး
လစ်မစ် မရှိလို့ကတော့ ဘ၀ ပျက်သွားနိုင်တယ်
ဘ၀ ပျက်ရင် ကိုယ်သာ မဟုတ် ကိုယ်နဲ့ ဆက်နွယ် နေသူတွေပါ ပျက်မှာ
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် လောင်းကစားနဲ့ နွယ်ပြီး တခြားကိစ္စတွေကြောင့် ထောင်ကျသွားတယ်
အမဲစက် ထင်သွားတော့ ပုံမှန် ဘ၀ ပြန်တိုးရတာ တော်တော် ခက်သွားတယ်
လူ လုပ်ရင် လူ တောင် ဖြစ်သွားတာပဲ
တကယ်ဖြတ်ချင်ရင် တကယ်ပြတ်ရမှာပေါ့ လုပ်စမ်းပါ
နှစ်ပေါင်းများစွာ အရိုးစွဲနေတဲ့ အကျင့်တစ်ခုကို ဖြတ်ရတာ တော်တော့်ကို မလွယ်ခဲ့တာပါ…ကျွန်တော်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျှော့ဖြတ်သွားတဲ့ နည်း သုံးတာ အခုဆို ဘာမှမလုပ်သလောက်ပါပဲ…တချိန်တုန်းက ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရသလို တခြားသူတွေ မခံစားစေချင်လို့ ရေးလိုက်ရတာပါ…လူဆိုတာကလဲ မကောင်းမှုမှာမွေ့ပျော်တဲ့ သဘောရှိတာကိုး…ပထမဆုံးကောမန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ nozomi ….
” ကျွန်တော်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျှော့ဖြတ်သွားတဲ့ နည်း သုံးတာ
အခုဆို ဘာမှမလုပ်သလောက်ပါပဲ ”
Congratulations ပါ !!!
ဆက် ထိန်းနိုင် ပါစေ ။
၀ါသနာဆိုတာကို တားမရရင်လည်း ၀ါသနာအလျောက်ပဲရှိပါစေနော်… ဘ၀ကြီးတစ်ခုနဲ့ မပုံလိုက်ပါနဲ့.. ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုတည်းဆို အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေ..ကိုယ့်နောက်မှာ အိမ်ထောင်ဖက်၊ သားသမီးဆိုတာကြီးရှိနေတာ… သူတို့ဘ၀တွေကိုပါ ပုံမလောင်းမိအောင်တော့ ကြိုးစားကြည့်ပါနော်…
အစတုန်းကတော့ လူတိုင်း အပျော်ဆိုတာက စကြတာပဲ…နောက်မှ ပျော်ရာက ပျက်သွားတာ…နောက်ပြီး ကိုယ်မွေးလာတဲ့ သားသမီးကို ဒီဝါသနာဆိုးကြီး ကပ်ပါလာမှာ ကျွန်တော် တအားကြောက်တယ်…ပထမမွေးတာက သမီးဆိုတော့ နည်းနည်း တော်သေးတယ်…နောက်မွေးမယ့်တစ်ယောက်ကို သားမွေးမှာကြောက်လို့ သမီးပဲဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းတာ မပြည့်ပါဘူး…ယောင်္ကျားလေးတဲ့…သေချာ ပြောပြပြီး ထိန်းရတော့မှာပဲ…
တစ်ယောက်ချင်းကပြောထားတဲ့ လောင်းကစားအကြောင်း အဖွင့် အရေးအသားကို အလွန်သဘောကျပါသည်။ ရုပ်ရှင်ကြေငြာတွေ၊ ၀တ္ထုနောက်ကြောဖုံးတွေမှာ ရေးထားသလိုပဲ မိုက်တယ်။
လောင်းကစားကိုစွဲနေမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပြီး ဖြတ်ဖို့လိုမှန်းသိတာ ကောင်းသောအစပါပဲ။ ဆက်ကြိုးစားပါရှင်။ အွန်လိုင်းမှာဖတ်ရသလောက်က… လောင်းကစားဖြတ်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့်လောင်းကစား လုပ်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့ အရင်းအမြစ်ကို စမ်းစစ်ကြည့်ပါတဲ့။
၁) ရိုလာကိုစတာတွေ ရဟတ်တွေ စီးရင်ရတဲ့ adrenaline လို့ခေါ်တဲ့ လျှပ်တပြတ် စိတ်လှုပ်ရှားမှု (?) ကိုလိုချင်လို့ လောင်းကစားဖြစ်နေတာဆိုရင် တော့ ဒီလို adrenaline ရနိုင်တဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ရှိတဲ့ အားကစား ဒါမှမဟုတ် ၀ါသနာ တစ်ခုခုကို ပြောင်းလုပ်ပါတဲ့။
၂) စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေဖြောက်ဖို့ အတွက် အာရုံပြောင်းအောင် လောင်းကစားတာဆိုရင် တော့ စိတ်ငြိမ်အောင် တရားထိုင်ကြည့်ပါ။ အန်တီပဒုမ္မာက ဒီအကြံပေးလိမ့်မှာ သေချာသလောက်ပဲ။
တခြားအကြံပေးချက်တွေ ဖတ်ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်ပါ။ http://www.helpguide.org/mental/gambling_addiction.php
စကားအတင်းစပ်… စင်္ကာပူအစိုးရက သူ့ပြည်သူပြည်သားတွေကို လောင်းကစားမစွဲစေဖို့အတွက် စင်္ကာပူမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ casino ထဲကို သူတို့နိုင်ငံသားတွေကို ဆော့ဖို့ ပေးမ၀င်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပဲ passport ပြမှပေးဝင်တယ်။ တော်တော်တရားတယ်။
သိပ်မှန်တဲ့ စကားပါ ကိုဂျွန်နီ
လောင်းကစားကြောင့် ဘဝပျက်တယ် ဆိုတဲ့ လူတွေကို သေချာလိုက်လေ့လာကြည့်ရင်
ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်း စားကြလို့ ပါ
အိတ်ကပ်ထဲ တစ်ရာရှိရင် အများဆုံး လောင်းရမှာ တစ်ရာပေါ့ ( ဝါသနာကြီးလွန်းရင် ပြောပါတယ် )
အခုဟာ က အိပ်ကပ်ထဲ တစ်ရာထဲရှိတာကို တစ်ထောင်လောက် လောင်းတဲ့ လူတွေ ဘဝပျက်ကြတာပဲ
ဒီပို့ စ်လေးကို သဘောကျနှစ်သက်ပါတယ်ဗျို့ 
ဖဲရိုက်တာ ဂျင်လောင်းတာ ဘောပွဲလောင်းတာမှ လောင်းကစား ဆိုပြီး လူတွေက မကောင်းမှန်းသိကြသေးတယ်။
အခုဆို ပဲအရောင်းအ၀ယ်ကို လောင်းကစားလို လုပ်နေကြတာကြောင့် ပြေးကြပြန်ပြီ ၊ဆုံးကြပြန်ပြီနဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒါကျတော့ မပြေးမချင်း ဒီလူကို လောင်းကစားသမားလို့ မမြင်ကြဘူး။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အလုပ်လို့ ဟန်ဆောင်မြင်နေကြပါတယ်။
အဒေါ့်ယောင်္ကျားဦးလေးတစ်ယောက်ဟာ ဖဲသိပ်ဝါသနာပါပါတယ်။သူဆုံးတဲ့ထိ ဖဲကစားသွားတယ်။
သူ့သားတစ်ယောက် ကျမ အကိုဝမ်းကွဲ လက်ထက်ကျတော့ ဖဲရော ဘောလောင်းတာရော ၀ါသနာ အရမ်းပါတယ်၊
သူ အသည်း ကင်ဆာရောဂါဖြစ်မှန်းသိကတည်းက အဲဒါတွေ ရှောင်ပြီး ဆေးကုရင်းနဲ့ တရားအားထုတ်ရင်း သေသွားပါတယ်။
သူက လူပျိုကြီးဆိုတော့ နောက် မျိုးဆက်လိုက်စရာ မရှိတော့ဘူး။
အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ တရားထဲပါသလိုပဲ မိဘက ကလေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကလေးငယ်စဉ် မှာ ပြုမူတဲ့ အပြုအမူဟာ ကလေးမှာ စွဲတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးက အသိဉာဏ်ရှိရင် ဒီအမှားကို ဆက်မမှားနိုင်ပါဘူး။
ကလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက လောင်းကစားရဲ့ မကောင်းကျိုးတွေကို ပြောပြောပြပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
ကိုဂျွန်နီရဲ့ သားလေးပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာကို ချီးကျူးပါတယ်။
သားလေးတွက် ကိုယ့် ၀ါသနာကို ရပ်ပစ်နိုင်တာ မေတ္တာဖြင့် ကိုယ်ကျိုး စွန့်လွှတ်ခြင်းပါပဲ။
ငွေတွက် မဟုတ်ပဲ လောင်းကစားကို ၀ါသနာကြီးတဲ့ သူတွေကို မနေနိုင်ရင် ပဲလှော်ကြေးသာလောင်းကြပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
(ကျမကတော့ နှမျောတတ်လွန်းလို့ ပဲလှော်ကြေး ဖဲရိုက်တာတောင် နည်းနည်းရှုံးရင် ဆက်မကစားချင်တော့ဘူး။)
Risk taker မဟုတ်တော့ မစွန့်စားရဲတဲ့သူ တစ်မျိုးပါပဲ။
သကြားလုံးကြော်ပြောသလို တရားထိုင်ပြီး ၀ါသနာကို ဖြတ်ပါလို့ မပြောချင်ပါဘူး။
ကိုယ်မှ တရားမှန်မှန်မထိုင်ပဲ ဆရာ မလုပ်ရဲပါဘူး။
ပေးချင်တဲ့ အကြံကတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အတိုင်း ဂဇက်မှန်မှန်တက် ပို့စ်တွေတင် ကွန်မန့်တွေပေး။ကိုယ့်ကို သူများဘာပြန်မန့်ကြလဲ ခဏခဏဖွင့်ဖတ်၊၂၄ နာရီမှာ ၁၆နာရီလောက် အချိန်ကုန်ပြီး လောင်းကစားပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့။
ပိုမေ့ချင်ရင် ဖတ်ရွေးထဲ ၀င်ပါလို့။
ကျနော်လည်း နက်ထဲဝင်ရင် ဂေဇက်ကိုဖွင့် ထားပြီး
တခြားဖက်က သတင်းဆိုဒ်တွေဖတ်လိုက်၊ ဂေဖက်ထဲက တက်လာတဲ့ကော်မဲင့် တွေကို ပြေးဖတ်လိုက်။
အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိ။
အရင်တုန်းကဆို အင်တာနက်ရှေ့ရောက်ရင် နက်ထဲကနေ ဘွတ်ကီဒိုင်တွေဆီမှာ အကောင့်ဖွင့်ထားပြီး ဘော့လုံးပွဲ လောင်းနေလိုက်တာ မနက်ဆို ဂျပန်လိဂ်…ကိုရီးယားလိဂ်…ကနေ စလောင်းလိုက်တာ….ညနေဆို အာရပ်လိဂ်တွေရောက်သွား…အဲ့ဒီနောက် တညလုံး ဥရောပလိဂ်အစုံ…မိုးလင်းခါနီးတော့ မေဂျာလိဂ်..ဘရာဇီးလိဂ်…မက္ကဆီကိုလိဂ်…တကယ့်ကို အစုံပါပဲ…ကြာလာတော့ စီးပွားရေးတင်မကဘူး…ကျန်းမာရေးပါထိလာတာ…ခုတော့ ညဆို ပို့စ်တွေ ရေးဖြစ်နေတာနဲ့ ကျန်တာသိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး…ကောင်းတာ မကောင်းတာ အပထား…အားပေးကြဦး…padonmar ကိုလဲ ကောမန့်အရှည်ကြီးအတွက် ကျေးဇူးပါ…
ပျော်ရွင်သောက်စား လောင်းဂစား စီးပွားပျက်မည်တိ(ကြားဖူးနားဝ စကာပုံ)
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လောင်းဂစား ကိုမကောင်းမှန်းသိ ဖြတ်နိုင်ဖို့စိတ်ကူးတာလေးကို ကြိုဆိုပါ၏…
ကျွန်ုပ်သည်လည်း တစ်ချိန်က လောင်းကစား တစ်ခုတည်းကိုသာ တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ခဲ့ဖူးပါ၏…
အနိုင်ရတုန်းမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးပါ၏…. အရှုံးရလဒ်များ ၀င်လာသေားအခါ… လွန်စွာစိတ်ဆင်းရဲရပါ၏…
ဆိုပြီး တွေးထားတဲ့ အတွေးလေးက ထပ်တူညီလှပါ၏….
ကျုပ်လည်း တစ်ချိန်က ထိုသို့တွေးခဲ့ဖူးပါ၏……….
လောင်းကစားမှာ သမရိုးကျ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကလိမ် လောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်းဟူ၍ ရှိပါ၏….
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဒိုင်ကစီးပါ၏… ကလိမ်ကတော့ သေချာပေါက် ဒိုင်အနိုင်ရသည်ပေါ့ဗျာ…..
ယခုအချိန် အကျွတ်တရားရနေပြီ ဖြစ်သောငြား လောင်းကစား၏ ရိုတ်ခတ်မှုများကတော့
လောင်းကစားကို အကျွတ်တရား ရစေမည့်အတွေးအခေါ်လေးများ……………..
လောင်းကစားပြုလုပ်ရာမှာ အနိုင်ရသည်ဟုထား၍ အရင်ဆုံးစဉ်းစားမည်ဆိုပါစို့……
ငွေကိုအလွယ်ရသည့်အတွက် အလွယ်ဖြုန်းတတ်တဲ့ အကျင့်ဝင်လာမယ်…….
အလွယ်ရနေကျရှိတဲ့လူက ကံဥာဏ် ၀ိရိယ သုံးပါးစိုက်ရပြီး လွယ်လင့်တကူ ငွေမရတဲ့
ကောင်းသောအလုပ်ကို လုပ်ချင်စိတ် ကုန်ခန်းလာ၏….. ဤကား ဆိုးကျိုး နံပါတ် (၁)
လောင်းကစား လုပ်လို့ရှုံးသေားသူမှာ မပျော်နိုင်ဖြစ်ရ၏ အင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲရ၏….
ထိုသူနှင့် ပတ်သတ်သူများပါ ဒုက္ခရောက် ကြရ၏…. ထို့ကြောင့် တစ်ဖက်လူ စိတ်ဆင်းရဲ
ပြီးမှရလာသော ငွေသည်မိမိအား ကောင်းကျိုးမပြုနိုင်ပါ… တစ်နည်းမဟုက် တစ်နည်း
ပြန်ကုန်သွားမည်မှာ သေချာလွန်းလှ၏…. ထိုကား ဆိုးကျိုး နံပါတ် (၂)
လောင်းကစားလုပ်ရင်း လက်ထဲရှိသည့်ငွေအကုန်ရှုံးသွားပြီဆိုပါက ပစ္စည်းရောင်းရ၏
ပေါင်ရ၏… ရောင်းလျှင် ဗိုက်နာဈေး တစ်ခါရှုံးပြန်၏…. ပေါင်လျှင် အတိုးပေးရ၏…
ပစ္စည်းကပေးထားရပြန်၏… ရွှေဆိုသော်လည်းမိမိ မ၀တ်ရပဲပေးထားရပေ၏…
ကား.ဆိုင်ကယ် အခြားအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများဆိုလျှင်လည်း အတိုးပေးရ တစ်ပန်းရှုံး၏….
မိမိပစ္စည်းကို မိမိအသုံးမပြုနိုင်တော့သည့်အတွက် တစ်ပန်းရှုံးပြန်၏……….
အလုပ်လုပ်ရင်းနှင့် ရှုံးသည်ဆိုပါက လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ မိမိထံမှာ ကျန်ရစ်နေဦးမည်
ထိုသို့ကျန်နေခြင်းက ပြန်လည်အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားဖို့အတွက် ၅၀% မိမိဖက်မှရှိနေခြင်း
လောင်းကစားလုပ်ရင်း ရှုံးပါက ငွေအလွယ်ရလိုတဲ့စိတ်… ဟုက်သောရှိ မဟုက်သော်ရှိ
အလွယ်တကူ ငွေဖြုန်းတတ်တဲ့ အကျင့် ထိုထက်မက အကျိုးနည်းလှပေ၏…..
အနိုင်ရပေသည်ပဲထား မိမိအနိုင်ရလိုက်သော ငွေများသည် တစ်ဖက်လူ၏ ချွေးနည်းစာများလည်း
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၏… တစ်ဖက်လူ စိတ်ဆင်းရဲပြီးမှရတဲ့ ငွေဖြစ်တဲ့အတွက် မရှုံးချင်ပဲ
ပေးလိုက်ရသည့် ငွေဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိလည်း တစ်ချိန်မှာ မကုန်ချင်ပဲ ပြန်ကုန်မည်မှာ မုချဖြစ်ပေ၏.
အရေးအကြီးဆုံး အယူမမှားဖို့က အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အရှုံးများ မရှုံးပဲ အနိုင်ရနေပါမူလည်း
တစ်ဖက်လူ၏ မပေးချင်ပဲပေးလိုက်ရတဲ့ ငွေတွေကို မိမိကအသုံးပြုသဖြင့် တစ်ချိန်မှာ
မိမိလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အရှုံးကြီးပြန်လည်ရှုံးရပေလိမ့်မည်…
မှတ်ကြကွဲ….. လောင်းကစားဆရာ့ ဆရာ မောင်များ မယ်များတို့…………………….
ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံမို့လဲ ဒီပို့စ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့ ငွေတွေဘယ်လောက်
ပြန်ရနိုးနိုးနဲ့ လိုက်ရင်းလိုက်ရင်း နစ်သွားတာပဲ…ဘရိတ်အအုပ်မြန်ပေလို့ဗျို့
နို့မို့ ကြီးမိုက်ဒီနေ့ လမ်းဘေးရောက်နေလောက်ပြီ….အဓိကကတော့
ရေးတဲ့ပို့စ်လေးမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့… :hee:
လောင်းကစား.. မိန်းမ.. အရက်.. အကုန်ရတယ်..
ကျုပ်ကတော့.. လပ်စ်ဗေးဂတ်သွားရင်.. အဲဒီမြို့ကြီးနားနီးလာရင်.. သဲကန္တာရအလယ်မှာ.. မီးတွေထိန်ထိန်ညီးနေတဲ့.. ဧရာမမြို့ကြီးတွေ့တိုင်း ပြောပါတယ်..
ငါတို့တွေ.. အဲဒီမီးလုံးလေးတွေ.. ထွန်းနိုင်ဖို့.. တတပ်တအား ..ပါဝင်ကူညီ လှူမယ်လို့..
ပြန်လာတဲ့.. အပြန်လမ်း.. လည်ပြန်လှည့်ကြည့်… မီးတွေလင်းထိန်နေတဲ့.. မြို့ကြီးမြင်ရတာပေါ့..
သကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီသပါပေစွ……….
ဗုဒ္ဓ၏ လမ်းစဉ်အတိုင်း မိမိက ယူရသည်ထက် ပေးရသည်ကို ပို၍နှစ်သက်သော
ဒီအိမ်လည်း ခညား အိမ်ဘာလား ဘဘဂျွန်နီဒီးရား ကြီးရ …
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်လက်ထဲက ဖိတ်စာတွေထဲမှာ ဒီအိမ်ပါဒယ် ..
ဒီတော့ ထပ်ဖိတ်ပါဒယ် ….
” မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု နှင့် ရွာ့ဘုရားပွဲ “ ကို ကြွရောက် ပါဦးလို့ …
လာဘီးဒါးမှန်း သိဒယ် …
ခုဟာက အထူး စပါယ်ချယ် လာဖိတ်ဒါလို့ မှတ်ဘီး ထပ်ကြွဘာ ..
ကိုင်း .. ခြေကြွခ ပိုက်ပိုက် ပေးဒေါ့ …. ဟီး ..